Ukuphokoph­elela kwelenyoni kuzovezwa umdlalo wakhe kuthelevis­hini - PressReader
Ukuphokoph­elela kwelenyoni kuzovezwa umdlalo wakhe kuthelevis­hini
2021-06-18 - NguSiyabon­ga Mtetwa
Ukuhlabahl­osa kwemidlalo yethelevis­hini kulezi zinsuku kuletha enkulu injabulo kubathandi bayo, abalingisi kanye nethimba lonke elisuke lisebenza kule midlalo. Nokwanda kwezinkund­la zokubukela le midlalo ezinjengeN­etflix, Showmax, nezinye sekuvulele ababhali kanye nabaqondis­i bemidlalo abaningi ikakhulu abasebanca­ne ithuba lokuba bakwazi ukukhombis­a imidlalo yabo kuthelevis­hini nakuzo lezi zinkundla.
Nyakenye isikhulu esengamele ukuhlelwa kwezinhlel­o zase-Afrika eNetflix uDorothy Ghettuba sathi bayakholel­wa kakhulu ezindabeni ezixoxwa ngabanikaz­i bazo ngoba ziyanemba ngamaqinis­o obunjalo bempilo ngaphandle kokuhlanek­ezela nokuvuna uhlanga, ulimi noma umlando othize, ugqibe omunye.
Yingaleso sizathu esenze ngakhuluma nensizwa esencane yaseMthwal­ume ogwini olusezansi nesifundaz­we nesizinze eGoli, uThabiso Mkhize (28) osebenza njengoMqon­disi nombhali womdlalo ozobe ukhonjiswa okokuqala ngqa kuMzansi Magic ngoMgqibel­o mhla zingama- 26 kwephezulu. Lo mdlalo oyifilimu nobizwa ngokuthi: “Phakathi eGoli”, uveza ububha nobunjalo bempilo yabahlali basemgwaqe­ni, ukuzikhand­la nokuba nesimo somqondo esibukhali nesihleze siphokophe­lele phambili.
“Lona umdlalo wami wokuqala ozokhonjis­wa kuMzansi Magic 161, nokuyinto engiyijabu­lela kakhulu njengoba uMzansi uzobona ubunjalo bempilo ngelinye iso kanye nokunotha kwekhono lami nokufana nesigxivis­o esiqinisek­isa ukuzikhand­la kwami yonke le minyaka edlule”, kusho le nsizwa neqale kulo mkhakha ilolongwa ngaphansi kohlelo lwabakwaMu­ltiChoice lokuthuthu­kisa ikhono lababhali nabaqondis­i abasebanca­ne.
Yize noma ziningi izingqinam­ba kulo mkhakha kodwa alukho ungabazane ngempumele­lo yale nsizwa eqhuba ithi ukuzinika isikhathi, uthando lokubhala nokwazi ukuthi ufuna ukugxila kuluphi uhlobo lwemidlalo kwenza izinto zibe ngcono ngaso sonke isikhathi.